Semalt Expert mamaritra an-tsarintany ny mombamomba ny mailaka mba tsy hiady saina intsony
Misy mailaka 294 lavitrisa nalefa isan'andro, tsy mahagaga raha ianaotokony manantena ny handray ny anjaranao amin'ny mailaka fanentanana isan-kerinandro ianao. Amin'ny ankapobeny, ny mpividy dia mahazo fanentanana 25mailaka isan-kerinandro - zava-misy izany, saingy toy ny amin'ny tetikady ara-barotra hafa rehetra, ity tarehimarika ity dia mety ho tafahoatra.
Tokony ho fantatrareo fa angano an-tserasera no miankina amin'ny halavany.Mailaka an'arivony tapitrisa no voadidy ho fomba fanao tsara indrindra. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny asa ho an'ny orinasa hafa dia mety tsy miasaHo anao sy ianao tsy tokony hampifangaro ny angano amin'ny zava-misy - name computer companies.
Ireto manaraka ireto dia angano an-tserasera an-tserasera nalefan'i Alexander Peresunko, mpitantana ny Success Suisse Semalt Digital Services:
1. Ny fandefasana mailaka bebe kokoa dia fomba iray ahafahana manalefaka ny mpanjifanao
Lohahevitra iombonana amin'ny mailaka mailaka dia ny faharetan'ny mailaka, ary araka ny fikarohana,Io no antony iray mahatonga ny olona maro hanindry ny bokotra tapaka. Na izany aza, tsy tokony hahakivy anao ny mandefa mihoatra noho izanymailaka iray isan-kerinandro. Raha mahomby ny fanentanana mailaka an-tserasera, dia mbola hihaino sy handray andraikitra ireo mpanjifanao.
2. Aza alefaso imailaka mitovy
Araka ny antontan'isa avy amin'ny 2016, 75 isan-jaton'ny olona ao amin'ny tahirin-kevitra momba ny gazetinayAza mamaky ny mailakao. Mety hianjera amin'ny alàlan'ny famoahana ny mailakao ianao, ny tolotra avoakan'ny mailaka ambony na ny sasany amin'ireo mpijery anaobe loatra. Midika izany fa tsy mety ny mamerina mailaka fa ireo izay tsy nanokatra azy ireo voalohany ihany. Azonao ampiasaina koa ny hafamodely fa miaraka amin'ny votoatiny ihany. Na izany aza, tokony manaraka ireto torohevitra ireto ianao rehefa mamerina mailaka:
Mamorona loharanom-pampianarana samihafa rehefa mamerina
Mamerina ny mailakao manan-danja indrindra
Omeo 72 ora alohan'ny handefasana mailaka
3. Ampiasao ny tenimiafina tsy andoavam-bola ao amin'ny laharam-pahamehana
Ny filahatry ny spam androany dia tsy toy ireo nampiasaina nandritra ny taona voalohan'ny mailaka mailaka.Ireo filahatry ny spam amin'izao fotoana izao dia manana fepetra vaovao toy ny laza, izay manamarika ny fitenenana "spam" ao amin'ny loha-hevitra izay tsy fantatraNolazaiko ny fotoana i..e. Discount, Free, ary Save
4. Tokony hahaliana anao ny isan'ny fanoratana
Ny fanoratana dia midika fa tsy te-hahazo ny mailaka intsony ny mpamaky.Raha tokony ho voakasik'izany, dia vaovao tena vaovao tokoa satria manadio ny antontan-taratasy ho anao ny mpamaky ary manatsara izanykalitaon'ny mailaka daty.
5. Ny Talata no andro tsara indrindra handefasana mail
Tsy misy andro tsara handefa mailaka. Afaka mahazo valiny tsara ianao rehefa mandefamailaka mandritra ny andro fiasana ary na amin'ny faran'ny herinandro aza, indrindra raha mihazakazaka fivarotana e-commerce ianao. Ny zava-misy dia mailaka maro no nalefa nandritra ny andro fiasanamihoatra noho ny faran'ny herinandro.
6. Alaharo foana ny loha-hevitrao
Araka ny voalazan'ny Implix, ny andalana voafaritra misy tarehintsoratra mihoatra ny 25 dia azo inoana kokoamba hamakiana azy ireo mihoatra noho ireo olona manana tarehimarika kely. Raha tokony hanantitrantitra ny halavan'ny toetr'andro, dia manomboka amin'ny loha-hevitra manintona,ary ianao dia hanana mailaka tsaratsara kokoa.
7. Ny taham-pahaizana dia mamaritra ny fahombiazana
Ny 90 isan-jaton'ny mpividy dia mampiasa ny taham-pamokarana ho toy ny metrika fototra ho an'ny mailaka mahombyhetsika. Ny taham-pamokarana dia tsy mitantara ny tantara manontolo, hany ka maro ireo mpampiasa ny sary no voasakana noho ny diplaoma izay midika fa ny tahan'ny fisokafanadia tsy hahomby sy hanaraka marina. Maro koa ny mpampiasa finday mampiasa formata, ary mampihena ny fahamendrehan'ny taham-pamokarana izanytahirin-kevitra.
Mampiasà metimety hafa toy ny fitarihana entina amin'ny mailaka sy ny taham-pivoarana ho an'ny data marina.
8. Adiresy mailaka dia maty
Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mailaka no endrika azo itokisana indrindra ary lasa manjaryMitombo bebe kokoa. Ny fivarotana mailaka dia manana ROI ambony kokoa raha oharina amin'ny dokam-barotra sy ny dokam-barotra.
Aza manaraka ny fomba fanao tsara indrindra, andramo ny tenanao mba hamaritana ny angano amin'ny zava-misy.